DEG-DEG: Luka Modric Oo Markale Cristiano Ronaldo Iyo Mohamed Salah Ku Garaacay Abaal Marinta Xidiga Aduunka Ugu Fiican Ee The Best. - GOOL24.NET
Luka Modric ayaa markale abaal marintan ku garaacay Cristiano Ronaldo iyo Mohamed Salah oo uu hore uga horqaaday abaal marintii xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican. Luka Modric ayaa codkii ugu badnaa ka helay saddexda musharax ee abaal marinan u tartamayay.
Laakiin guud ahaan sanadkan waxa uu noqday midkii ugu khilaafka badnaa ee abaal marinaha shaqsiga ah kadib markii uu Modric ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub iyo kan aduunka iyada oo Cristiano Ronaldo uu labada jeerba abaal marintan ku jiray saddexda xidig ee iskugu soo baxay.
Haddaba akhriste, Luka Modric ma u qalmay in uu ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka ee aduunka ugu fiican ee The Best? Haddii aad aaminsan tahay in aanu u qalmin, xidigee ayaa ugu haboonaa ayaad isleedahay?